Silaanyo briijkii Hargiesa iyo kii Burco ba wey ku dul dumeen by by Abdi Mustafe‏
Silaanyo briijkii Hargiesa iyo kii Burco ba wey ku dul dumeen by by Abdi Mustafe‏ 0 July 29, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 488
Silaanyo briijkii Hargiesa iyo kii Burco ba wey ku dul dumeen by by Abdi Mustafe‏ Xashiishka
magaalooyinka qarqiyey iyo biyo la'anta baahsan baadh baadhi maayo ee waxa ka sii daran briijkii Hargiesa oo baabuurti ka baqatay oo ay hoos marayaan iyo burco oo hadii daad qudhi soo maro dumaaya iyo briij kale oo dhexda ka dalooshamay oo ku yaala dariiqa Berbera uuga baxa Shiekh. Meel Silaanyo iyo Kulmiye iyo xukuumadiisu wax ka qabteen bal sheega. Boob iyo dhac mooyee maxay xukuumadani tartaa. iminkana u jeedada uugu weyn ee kooxda budhcada ihi ay leeyiin waxa weeye inay dalka sidaa ku heystaan iyo in ay dagaal ka ridaan oon wadan ka danbayn. Waa dowlad aan
xaaraanta iyo xalaasha kala aqoon. Xirsi oo wadaad iska dhiga ayaa intaa wuxuu faraqayaa lacagtii ummada. malaa kuwani taariikhda aduunka ayaanay waxba ka aqoon ee waxaynnu arki iyagoo sakaraadka lagu wada dhibayo. Bait al maalka xoolihii yaalay ee ummadu lahayd ayay u istic maalayaan sidii xoolo ay iyagu leeyiin. Dhimasho iyo xisaab wey iska baal mareen oo waxay xasuusan doonaan markay kursiga ka degaan iminka kol haday lacag urursanayaan diin iyo islaam nimo iyo daacad nimo iyo dad nimo intaba wey ka dheeraadeen oo waxay moodayaan in aan ilaahay soo
qaban karayn. kuwani uuma baahna in la xasuusiyo in ay dhimanayaan oo kol haday lacag heleen iyada ayaa wax walba u ah. Silaanyo iyo Sulieman gaal oo aakhir al-cimri ah ayaa ummada boobay oo isku diraya ee bal aynnu sugno waxay ku danbeeyaan.
Name: Email: Website: Security Code: Comment: Social Media Related Items Afhayeenka Ciidanka Booliska Faysal Xiis Oo Ka Haddlay Xadhiga Siyaasi Cabdilaahi Daamur
Sheeko Kale: Nafyahay Kaskaagii:By/Cabdisalaam Yaasiin
27/04/2017 - 07:18:36